Web Developmnet ဆိုတာဘာလဲ ?
Web Development ဆိုတာ Internet ( world wide web ) or Intranet ( private network ) သုံးဖို့ အတွက် website တစ်ခုရေးသား ဖန်တီးခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်.
Web Development လို့ခေါင်းစဉ်တပ်တဲ့ နေရာမှာ Single Simple Static Page လို့ခေါ်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာစာဘဲ ပါတဲ့ website လေးမှ စပြီး ကြီးမား ကျယ်ပြန့်ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ Dynamic Web application တွေအထိပါဝင်ပါတယ်
Web Development tasks ဆိုတာဘာလဲ ?
Web Development ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက် မှာ ဆင့်ပွားခေါင်းစဉ်ပေါင်းများစွာပါရှိပါတယ်
web engineering, web design, web content development, client liaison, client-side/server-side scripting, web server and network security configuration, and e-commerce development, etc.
အဲ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေ အားလုံးဟာလည်း သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ Professional လမ်းကြောင်းတွေ အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်
PHP ဆိုတာဘာလဲ ?
PHP ဆိုတာကတော့ Web Application တွေရေးသားတဲ့ နေရာမှာသုံးတဲ့ Server Side Scripting Language တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
PHP နဲ့ ဘာတွေဖန်တီးလို့ရနိုင်ပါလဲ ?
ယျေဘူယျအားဖြင့် PHP နဲ့ Website ( static and dynamic ) တွေ၊ Web Application တွေ ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
Wordpress,Dupral တို့လိုမျိူး Open Source Content Management System မျိူးတွေလည်းရေးသားဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သုံးလို့ရသည့်နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါသေးသည်။
PHP ရေးဖို့ အတွက် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ ?
eg. PHP ကို Window OS တစ်ခုမှာ ရေးသားအသုံးပြုချင်သည်ဆိုခဲ့လျှင်
ကျွန်တော်တို့ PHP နဲ့ Website / Web Application တွေကိုရေးသားသည့်အခါ ( မိမိကိုယ်ပိုင်စက်ထဲတွင်ရေးသားသည့် အခါ - local လို့သုံးနှုံးကြပါသည် ) PHP Script တွေကို Run ဖို့ အတွက် PHP serverice and Web Server ( Apache Web Server ) တစ်ခု မိမိစက်ထဲတွင် ကြိုတင်ပြီး Install လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ Database Engine ( eg. MySql ) တစ် ခုခုလည်း Install လုပ်ထားဖို့လိုပါသည်။ သို့မှသာ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက် ( local ) ထဲတွင် PHP ဖြင့် Website / Web Application များကို ရေးသားပြီး Run နိုင်ပါသည်။
Apache, PHP, and MySql Installation အတွက် XAMPP ဆိုသည့် Control Panel ကို Window OS တွင် Install ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
XAMPP သည် PHP, MySql, Apache စသည့် Services များကို စုစည်းထားသည့် Installer Page ( Panel ) တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Laravel ဆိုတာဘာလဲ ?
Laravel ဆိုတာကတော့ PHP နဲ့ရေးသားဖန်တီးထားတဲ့ Open source MVC Framework တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Laravel ကိုသုံးပြီး သေးငယ်တဲ့ Static Website လေးများ ကြီးမားရှုပ်ထွေးသည့် Web Application များအထိရေးသားဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ယျေဘူယျ သဘောတရာားမျှသာရှိပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် အသုံးချလို့သည့် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါသေးသည်။
hosting ဆိုတာကတော့ မိမိရေးသားထားသော Website / Web Application များကို Setup and Configuration ပြုလုပ်ပြီး Run လို့ရနိုင်သည့် OS တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Hosting သည် Server OS အမျိူး အစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိတို့ Local PC များကဲ့သို့ OS အမျိူးအစား Machicne တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။
Block 56, Ground Floor-01, Zalun Street, Sanchaung Township, Yangon